पर्वतको कुश्मामा फेरी अर्को अग्लो र लामो पुल बन्दै, हेर्नुहोस कहाँ र कत्रो बन्दै छ ! - News site from Nepal
पर्वतको कुश्मामा फेरी अर्को अग्लो र लामो पुल बन्दै, हेर्नुहोस कहाँ र कत्रो बन्दै छ !
पर्वत– अग्ला र लामा पुलले ख्याती कमाएको पर्वतमा फेरी अर्को उस्तै अग्लो र लामो पुल निर्माण हुने भएको छ ।
पर्वत सदरमुकाम कुश्मालाई छिमेकी जिल्ला बागलुङसँग जोड्ने गरी पुल बन्न थालेको हो । कुश्माको बडागाउँस्थित लभ्लीडाँडादेखि बाग्लुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थित कुकुरगाढेमा अर्को पुल बनाउनका लागि सर्वेक्षण गरिएको छ ।